Etu esi echekwa site na Coronavirus? | RayHaber | raillynews
HomeGeneralEtu esi echekwa site na Coronavirus?
11 / 03 / 2020 General, Turkey, VIDIO
Kedu otu esi echebe site na coronavirus
Enweghị ọgwụ ọ bụla egosipụtara na ọ dị irè maka coronaviruses taa. Maka nke a, a na-enye ndị ọrịa ọgwụgwọ iji belata mkpesa ha na iji kwado ọrụ akụkụ ahụ, ọ bụrụ na ọ dị. Ndi mmadu rigoro ma obu gaa China na ubochi iri na anọ n’obodo anyi kwesiri igha ebe nlekota ahuike kachasi nso ma oburu na ha nwere oria dika ahu oku, ukwara, na nsogbu iku ume.
G AREN THE B THE THEzọ TO GA-EME VIRUS?
Enwere ike ibunye ndị ọrịa chọpụtara coronavirus mgbe anyị rutere ihe karịrị otu mita. Ekwesighi ịbịaru ndị ọrịa dị ka o kwere mee. Iji gbochie nke a, ndị ọrịa ekwesịghị ịbanye n'ime obodo dịka o kwere mee, kama ha kwesịrị iyi nkpuchi ma ọ bụrụ na ha ga.
Ekwesịrị izere mmachi aka na ịmakụ.
UMUPRER FROM NSOGBU N ’EGO EGO
Mgbe anyị na-a coughụ ma ọ bụ ịmị,, ọ bụrụ na anyị enweghị handkerchief, anyị kwesịrị ịmụrụja ma ọ bụ kubie aka anyị. Nke a bụ usoro nchebe ọ bụghị naanị maka coronavirus, kamakwa maka oyi na flu ndị ọzọ.
Idebe aka dị ezigbo mkpa. Anyị kwesịrị ịsa aka anyị ozugbo anyị si n’ụlọ anyị lọta. Iji ncha na mmiri ọ bụla o kwere mee, ọ dị mkpa iji asacha n'etiti mkpịsị aka ahụ, n'akụkụ aka aka, n'ọbụ aka, wee kpọọ nkụ. Ọ bụghị ịgafe mmiri.
Anyị kwesịrị inwe mmiri ọgwụ na-anaghị achọ mmiri mgbe anyị nọ n’èzí n’ehihie. Ọ bara uru iji ọgwụ ndị na-egbu egbu mee ihe mgbe anyị rụchara ọrụ anyị mgbe anyị na-azụ ahịa n'ahịa ka anyị na-aga n'ụzọ ụgbọ oloko.
EGO NA AKW PKWỌ AK PKỌ
Ọ kwesịrị ka ikuku kpoo ya ugboro ugboro.
Ekwesịrị itinye uche na nhicha elu. Ọ bụrụ n ’ihichapụ ya ugboro abụọ n’ụbọchị, ọnụ ọgụgụ a kwesịrị okpukpu abụọ. Nke a bụ maka ụlọ.
Ihe nchacha aka kwesịrị ịdị n’ebe ndị a.
EGO GỌRỌ OSBỌCHOS NSỌ
Na mgbakwunye na ihe mgbaàmà nke flu na flu, ndị na-eto eto na-enweghị ọrịa ọ bụla kwesịrị ịkpọtụrụ dọkịta mgbe ha nwere ume iku ume.
Ndị na-anata kansa, ọrịa akụrụ, ntụgharị obi, na igbochi usoro ahụ ji alụso ọrịa ọgụ ga-aga ụlọ ọgwụ ozugbo, ọbụlagodi na ha nwere ọrịa flu nkịtị.
Ọ kọwara na Ministry of Health ekwesighi iyi mkpuchi nkpuchi maka ndị na-abụghị ndị ọrịa. E kwuputara na ikpuchi nkpuchi nwere ike iduga "n'echiche nke nchebe". Ka ọ na-ekpuchi nkpuchi, ịghọta banyere 'ok a echebe m' pụtara. A na-atụ aro ka ndị na-arịa ọrịa na-eyi ihe mkpuchi. Ọ dị mkpa karịa ndị na-abụghị ndị ọrịa ka ha na-akpachara anya dị mkpa anyị gụrụ tupu ha ejiri ihe nkpuchi.
Kedu ihe bụ Izmirim Card, Olee otú ịzụta, Ịkwụsị na ịjụ ajụjụ?
Abalị Metro nke Metro Istanbul na-amalite! .. Kedụ ka a ga-esi nye nchekwa? .. Abalị…
Ebee ka Zigana Ski Center dị? Etu esi enweta Kedu ka ọnụahịa na ohere ụlọ?
Kedu ka ọrụ ụgbọ ala ụgbọ elu dị?
Snowstorm ke Palandökende
Mmiri siri ike na Uludag
Snowstorm kwụsịrị oche elebanye na Uludag
Otu esi egbochi ihe mberede na Uludağ Ski Center
Kedu ka ọrụ Marmaray si emetụta njem ụgbọ mmiri? Kedu usoro e ji?
Otú Marmaray Project si emetụta njem ụgbọ mmiri
Otu esi eme ugboala
Ònye ga-arụ ọrụ Ankara Metros?
Kedu ka esi rute Altilozade Metrobus Kwụsị?
Ònye bụ onye na-arụ ọrụ igwe?
Kedu otu esi edozi nsogbu njem na Bursa?